အခုပုံနဲ့တကွ တင်ထားတဲ့ ပို့စ်တခုကို ပညာရေး ဂရုမှာ ဖတ်မိလိုက်တယ်။ ပို့စ်က ခပ်တိုတိုပါ။ မေးခွန်းထုတ်ထားတဲ့ ပို့စ်ပေါ့။
“ကျွန်မတို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက နံပါတ်(၁) နည်းနဲ့ ၀ါကျဖွဲ့လာခဲ့တာ၊ အခုတော့ နံပါတ်(၂)နည်းနဲ့ သင်ပါတဲ့။ ဆရာ၊ဆရာမတို့ရော ဘယ်လိုသင်လဲရှင်”
..လို့ မေးခွန်းထုတ်ထားတဲ့ အဲဒီပို့စ်ကို လူ ၅၀၀ ကျော်က မှတ်ချက်တွေနဲ့ ပြန်ဖြေခဲ့ကြတယ်။ ပြန်ဖြေကြသူတွေ အများစု ပြောကြတာက ၀ါကျဖွဲ့နည်း (၁) နဲ့သာ ဖွဲ့သင့်ကြောင်း၊ (၁)ကသာလျှင် အမှန်ဖြစ်ကြောင်း၊ (၂) လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မသင်ခဲ့ရကြောင်း၊ (၂)နဲ့ သင်ဖို့ ဘယ်သူက အမိန့်ထုတ်တာလဲ ဆိုတာတွေကအစ သတိထားမိတဲ့ မှတ်ချက် တခုမှာ ဆိုရင်...
“၁ ဆိုမှ ၁ ပါ။ ပြောင်းလဲရင် ပြီးရော ဆိုပြီးတော့ ပြောင်းချင်တိုင်းတော့ မပြောင်းသင့်ပါဘူး ခင်ဗျာ” …တဲ့။
သဘောက ဘာလဲဆိုတော့ စကားလုံး တခုကို ၀ါကျဖွဲ့ခိုင်းလို့ ကလေးတွေက ၀ါကျဖွဲ့ပြရမယ် ဆိုရင် ပုံစံ(၁)မှာ ပါတဲ့ အတိုင်း ပုဒ်မ နှစ်ခုနဲ့ အဲဒီလိုလေး ခြားပြီး ဖြေမှ မှန်တယ်။ ပုံစံ(၂)မှာလို ဖြေထားရင် ၀ါကျခြင်း အတူတူဖြစ်ပေမယ့် ဖြေနည်းက မှားမယ် ဆိုတဲ့ သဘော…။ အမှတ်ပေး စည်းမျဉ်းနဲ့ မညီဘူး ဆိုတဲ့ သဘော..။
တကယ်တော့ “စိုက်ပျိုး” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ၀ါကျ အဖွဲ့ခိုင်းတာသာ ဖြစ်လို့ စာသင်သား ကလေးငယ်က အဲဒီ စကားလုံးကို မှန်ကန်စွာ၊ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်စွာ ၀ါကျဖွဲ့နိုင်ခြင်း၊ မဖွဲ့နိုင်ခြင်းကိုသာ အဓိကထား ဆုံးဖြတ်သင့်တာ မဟုတ်ဘူးလား။ ပုံစံ (၁) နဲ့ပဲ ဖြစ်စေ၊ (၂)နဲ့ပဲ ဖြစ်စေ ၀ါကျ ရေးဖွဲ့ပုံ မှန်ကန်မှုကိုသာလျှင် အဓိက မထားသင့်ပေဘူးလား။
ပုံစံ(၁)ကသာ ဖြေနည်း အမှန်ဖြစ်တယ် ဆိုပြီး ပုံစံ(၂)နဲ့ ဖြေထားမယ့် ၀ါကျကောင်းတွေကိုရော ဘယ်လို စဉ်းစားကြမလဲ…။ အမှတ်ပေးမှာလား၊ မပေးဘူးလား။
ဒါကြီးက မေးခွန်းနဲ့ အဖြေပုံစံ ဖြေထားတာ၊ ၀ါကျဖြေနည်းက ဒီလို မဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ ၀ါကျကောင်းတွေနဲ့ ဖြေထားတဲ့ အဖြေတွေကို အမှားလို့ သတ်မှတ်ကြတော့မလား။
ကျွန်တော်တို့တတွေ ပညာသင်ကြားကြရတဲ့ အဓိက ရည်ရွယ်ချက်က ဘာများလဲ။
ကလေးတွေရဲ့ အဖြေလွှာတွေကို အမှတ်ပေး စစ်ဆေးရတဲ့အခါမှာ ဆရာ၊ဆရာမတွေ အတွက် အမှတ်ပေး စည်းမျဉ်းဆိုတာ ရှိရတာကို နားလည်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းဟာ တရားသေ ဆုပ်ကိုင်ထားသော ပိတ်မိနေတဲ့ ဘောင်တခုတော့ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။
အမှတ်ပေး စည်းမျဉ်းနဲ့ ညီရင် အမှတ် ဘယ်လောက်တော့ ရမယ် ဆိုပြီးတော့ ကလေးတွေရဲ့ အတွေးကို ဘောင်မခတ်မိစေသင့်ပါဘူး။ ဥပမာ “ပါရမီ” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုဝါကျ အဖွဲ့ခိုင်းတယ် ဆိုပါစို့…။
“ကျွန်တော်သည် ကျောင်းကို ပါရမီကား နေ့စဉ် စီးပြီးသွားပါသည်” လို့ ၀ါကျဖွဲ့ပြီး တော့ ပုံစံ(၁) အတိုင်း ဖြေထားတဲ့ အဖြေနဲ့ “” လို့ “မြတ်စွာဘုရားရှင်သည် ဘုရားဖြစ်တော်မူရန် ဘ၀ အဆက်ဆက် ပါရမီ ဖြည့်ကျင့်ခဲ့ရပါသည်” လို့ ၀ါကျဖွဲ့ပြီး ပုံစံ(၂) နဲ့ ဖြေတဲ့ အဖြေ ဘယ်သူက ပိုအမှတ်ရသင့်သလဲ။
တကယ်တော့ ပညာတွေ သင်တယ် ဆိုတာက ကလေးတွေရဲ့ တွေးခေါ် စဉ်းစားမှု ဉာဏ်ရည်ကို ပိုပြီးတော့ ပွင့်လင်းရှင်သန်လာစေဖို့သာ ဖြစ်သင့်တာ မဟုတ်ဘူးလား။
ဘောင်တခုကို မရှိရဘူးလို့ မဆိုလိုပါဘူး။ လိုတာထက် ပိုပြီး ဘောင်ခတ်ပစ်လိုက်ရင် အညွှန့်ကိုပါ ချုပ်မိသလို ဖြစ်သွားမယ် ဆိုတာကို သတိပြုရပါမယ်။
Letter writing နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ငယ်ငယ်က အလွတ် ကျက်ခဲ့ရလွန်းလို့ အခုထိ အမှတ်ရမိနေသေးတာ ရှိတယ်။
“Dear Mg Ba,
How are you? I hope you are well. As for me, I am fine too.
ဒါက ဘာလဲ ဆိုတော့ ဘာတွေချည်းပဲ အရေးခိုင်းခိုင်း၊ မင်း အဲဒါတော့ ပါအောင် ရေးကွ၊ အဲဒီလို ရေးနိုင်တာနဲ့တင်ကို အမှတ်က ဘယ်လောက်ရမှာကွ လို့ အသင်ခံခဲ့ရလို့ပါ။ ဒါနဲ့ပဲ “ဒီလောက် ကျက်နိုင်ရင် အမှတ် ဒီလောက်ရရင်လဲ မဆိုးဘူးပဲဟ” ဆိုတဲ့ အတွေးက ကျွန်တော်တို့ တွေးမိခဲ့ကြတာပဲ။ ဖြန့်ကျက် တွေးနိုင်စွမ်း၊ ရေးနိုင်စွမ်းကို အားမထုတ်ဖြစ်တော့ဘူး။
တကယ်တော့ Letter writing ရေးရခြင်းရဲ့ အနှစ်သာရဟာ အဲဒီထက်မက ပိုကျယ်ပြန့်တာ မဟုတ်ဘူးလား။ ကျွန်တော်တို့ အပေါ်က စာလုံးတွေ ရေးခဲ့ကြတာနဲ့တင် တကယ်ပဲ အမှတ်တွေ ရခဲ့ကြတာလား။ အဲဒီ အမှတ်ကနေ ပေးတဲ့ တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းက ဘယ်မှာလဲ…။
မြန်မာစာ ကဗျာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်စုတွေ၊ စကားပြေနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်စုတွေကို ဆရာမဖြစ်စေ၊ အတန်းခေါင်းဆောင် ဖြစ်စေက တိုင်ပေး၊ စာသင်သားတွေက လိုက်ရေး၊ အဲဒါကိုပဲ အာပြဲအောင် အော်ဟစ် ကျက်မှတ်ခဲ့ရ။ ဒီအတိုင်း ဖြေမှ အမှတ်ရမှာ ဆိုတဲ့ စကားသံတွေ…။ အမှတ်တွေ ရပြီးတော့ ပျောက်ဆုံးသွားမယ့် တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းတွေကို ထည့်မစဉ်းစားသင့်တော့ဘူးလား…။
ဘာသာရပ် တခု၊ သင်ခန်းစာ တခုကို သင်ယူလိုက်လို့ ရသင့်တဲ့ အရာဟာ အမှတ်တွေက အဓိက မဟုတ်ဘူး။ ဟုတ်လဲ မဟုတ်သင့်ပါဘူး။ အဲဒီ ဘာသာရပ်၊ သင်ခန်းစာကနေ ပေးတဲ့ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ အတွေးအမြင်ကို ယူနိုင်စေဖို့သာ အဓိက ပိုကျသင့်ပါတယ်။
ဒါဆိုရင် အမှတ်ပေး စည်းမျဉ်းက မရှိရတော့ဘူးလားလို့ မေးစရာရှိမယ်။ ရှိရမှာပေါ့။
ကလေးတွေရဲ့ အတွေးအခေါ်တွေနဲ့ ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးတွေကို အဲဒီ အမှတ်ပေးစည်းမျဉ်းရဲ့ ဘောင်က သတ်မပစ်လိုက်ဖို့သာ လိုတာ…။
ဒီဇင်ဘာလ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၁၆ ခုနှစ်။ ည ၁၁ နာရီ ၂၃ မိနစ်။
Posted by ကလိုစေးထူး at 12:07 AM 16 comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 1:17 AM 1 comments
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်တော် ပြန်သွားပါပြီ...တဲ့။
တချို့က သူ့ရဲ့ အမေရိကား ခရီးစဉ်ကို အောင်မြင်တဲ့ ခရီးစဉ်လို့ သတ်မှတ်ကြတယ်။ ဟုတ်မှာပေါ့၊ နိုင်ငံရေးရာ ကိစ္စရပ်တွေ အရ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ အောင်မြင်မှာပေါ့။ ဒါပေမယ့် သူ တကယ်ပဲ အောင်မြင်ခဲ့ရဲ့လား ဆိုတာကို ၀မ်းနည်းစွာ သံသယ ဖြစ်မိတာ တခုကတော့ ...။
သူဟာ သူ့ရဲ့ သားကြီး ကိုမြင့်ဆန်းအောင်နဲ့ တွေ့ခွင့်၊ စကားပြောခွင့် ရသွားပါလေစ ဆိုတာပါပဲ။
တချို့တွေ မှန်းဆကြသလို ကိုမြင့်ဆန်းအောင်က အနေသိုသိပ်သူ ဖြစ်လို့ သားအမိတွေ တွေ့ဆုံကြတာကို သတင်းတွေပေါ် မတင်တာဘဲ ဖြစ်ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိတယ်။
ဒီလိုမှ မဟုတ်ရင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဟာ နိုင်ငံအရေးအရာ အရ အောင်မြင်တဲ့ ခရီးစဉ်ကို သားကြီးအတွက် နာကျင်ရတဲ့ နှလုံးသားနဲ့အတူ အရှုံးကို ပိုက်ပြီး နောက်တခေါက် ပြန်သွားရတာနဲ့ အတူတူပါပဲ။
အမေရိကားကို လာတော့လဲ တာဝန်တွေ တပုံတပင် ထမ်းပိုးပြီး လာခဲ့ရ၊ ပြန်သွားတော့လဲ နောက်ထပ် တာဝန်တွေ တပွေ့တပိုက်နဲ့ အတူ လူမသိမသိ နာကျင်ရမှုတွေကိုပါ ကျွန်တော်တို့ ခေါင်းဆောင် ပြန်သယ်သွားရမလား ...။
စက်တင်ဘာ ၂၃ ရက်နေ့မှာ ကျင်းပတဲ့ "မြန်မာ့မိတ်ဖက် နိုင်ငံများ အစည်းအဝေး" ကိုဆိုရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ဘန်ကီမွန်းကိုယ်တိုင်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမြန် နေပြန်ကောင်းပါစေ ဆိုပြီး အခမ်းအနားမှာ ဆုတောင်းခဲ့ရတယ်။
အသက် ၇၀ ကျော် အမေအိုကြီးအပေါ် မြန်မာနိုင်ငံက လိုအပ်နေမှုဟာ သူတို့ သားအမိတွေ အပေါ် မမျှတလွန်းရာ ကျနေမလားလို့ တွေးလိုက်တိုင်း ၀မ်းနည်းစရာ ကောင်းလွန်းပါတယ်။
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:48 AM 1 comments
အဆင်သင့် ဖြစ်ခဲ့ပြီလား ...
ကျွန်တော့် သမီးကြီး လေးနှစ် ပြည့်တော့ ကျောင်းထားဖို့ အတွက် စီစဉ်ခဲ့ရတုန်းကပေါ့ ...။
ကျွန်တော်တို့ နေတဲ့မြို့မှာက ကလေးတယောက်ကို ကျောင်းစထားတော့မယ် ဆိုရင် တမြို့လုံးက စာသင်ကျောင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေကို ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ ရုံးတရုံး ရှိတယ်။ အဲဒီ ရုံးမှာ ကိုယ့်ကလေးကို စာရင်းသွားပေးပြီးရင် သူတို့က ကိုယ်နေတဲ့ လိပ်စာ အနီးအနားမှာ ရှိတဲ့ ကလေးကျောင်းတက်ဖို့ အဆင်ပြေလောက်မယ့် ကျောင်းစာရင်းတွေကို ပြတယ်။ အဲဒီထဲကမှ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက် သုံးခုလောက်ကို ပထမဦးစားပေး၊ ဒုတိယ ဦးစားပေး၊ တတိယ ဦးစားပေး ဆိုပြီး ရွေးချယ်ပေးရတာပေါ့။
ဒီတော့ ကျွန်တော်က သမီး ကျောင်းတက်ဖို့ အတွက် လာကြိုပေးမယ့် ကျောင်းကားကိစ္စ၊ ကျောင်းကနေ ကျွေးမွေးတဲ့ မနက်စာ နေ့လည်စာ ကိစ္စတွေ၊ ကျောင်းချိန်တွေကို စူးစမ်း မေးမြန်းရင်းနဲ့ စိတ်ထဲမှာ ခံစားနေရတဲ့ အတိုင်းပဲ သူတို့ကို မေးခွန်း တခု မေးဖြစ်မိခဲ့တယ်။
"ကျွန်တော်က ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် တယောက်ဖြစ်တယ်။ ဒီတော့ ကျွန်တော့် သမီးကိုလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ဖြစ်အောင်ကိုပဲ သွန်သင်ဖို့ ရည်ရွယ်ထားသလို သူ့ကိုလဲ ဗုဒ္ဓဘာသာပဲ ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ခရစ်ယာန်တွေ များတာမို့ ကျောင်းတွေမှာ ကလေးတွေကို ခရစ်ယာန် ၀တ်ပြု အစီအစဉ်တွေ၊ ခရစ်တော် ယေရှု အကြောင်းတွေကို သင်တာတွေ လုပ်လေ့ ရှိလား။ အဲဒီလို ကျောင်းမျိုးမှာ ကျွန်တော့် သမီးကို မထားချင်ပါဘူး"
ဟိုအရင်ကတော့ ရွှေပြည်ကြီးမှာ နေခဲ့ရတဲ့အခါ ကိုယ်က လူများစုထဲ ပါဝင်ခဲ့တာကိုး။
ငယ်ငယ်တုန်းကဆိုရင် တချို့ရက်တွေမှာ ကျောင်းက စီစဉ်ပေးလို့ ဘုရားရှိခိုးရတယ်။ လက်အုပ်ကလေး ချီလို့ သြကာသ ရွတ်ကြတဲ့အခါ တချို့ အတန်းဖော် သူငယ်ချင်းလေး တချို့က လက်ကပေးပိုက်ပြီး ဟိုဒီ ငေးလို့...။ အဲဒီ သူငယ်ချင်းတွေထဲ ဖြူဖြူလေးလဲပါ၊ ညိုညိမည်းမည်းလေးလဲ ပါတာပေါ့။
တခါတော့ ကျွန်တော်က ဘေးက အဲဒီလို လက်ကလေးပိုက်ပြီး ငေးနေတဲ့ သူငယ်ချင်းကို "ဟိတ်ရောင်၊ ဘုရား ရှိခိုးလေကွာ" လို့ ဆရာသွားလုပ်တာပေါ့။ အဲဒီ ကလေးက ကျွန်တော့်ကို ပြန်ဖြေတာ "ငါ့ဘုရားမှ မဟုတ်တာကွ" ..တဲ့။
အခု သူတပါး တိုင်းပြည် အမေရိကားကို ရောက်တဲ့အခါ မွေးထားတဲ့ ကိုယ့်ကလေးကို သူတို့ တိုင်းပြည်မှာ ကြီးစိုးနေတဲ့ ဘာသာထဲ ရောက်သွားမှာ အလွန် စိုးရိမ်မိတယ်။ ဒါက တပါးသူ ကိုးကွယ် ယုံကြည်တဲ့ အဲဒီ ဘာသာကို စော်ကား အထင်သေးလိုစိတ် လုံးဝ မရှိသော ကိုယ့်ဘာသာကိုသာ ကိုယ့်ကလေးက ကိုးကွယ်စေချင်တဲ့ မိဘရဲ့ အတ္တတမျိုးနဲ့ပါ။
လူအများစု ဖြစ်နေကြတဲ့ သူတို့တွေရဲ့ "ဘုရားသခင် ကောင်းချီးပေးပါစေ" ဆိုတာနောက်ကို သမီးကလေး ကောက်ကောက်များ ပါသွားလေမလား ဆိုတာကို ဗုဒ္ဓဘာသာ မိဘတယောက် အနေနဲ့ ပူပန်ရတာပါပဲ။ ပြီးတော့ ကိုယ်က နေရထိုင်ရတော့လဲ လူနည်းစု အနေနဲ့ နေရတာ။ ပြောကြတော့လဲ အင်္ဂလိပ်စကားတွေကသာ ခပ်များများ၊ မြန်မာစကားကို ကိုယ့်ရင်သွေးတွေ ပြောနေနိုင်ဖို့ကိုတောင် မနည်းအားယူ ကျားကန်နေရတဲ့ အခြေအနေ...။
တခါတလေ အိမ်ကို တံခါး လာခေါက်သော ဘာသာရေး စည်းရုံးတတ်သူများက ကျမ်းစာအုပ်လေး တကိုင်ကိုင်နဲ့ အဲဒီ စာအုပ်ထဲက ဘယ်အပိုဒ်ကို ရှင်းပြချင်လို့ပါ ဆိုရင် "ကျုပ်တို့က ဗုဒ္ဓဘာသာဗျ" လို့ မျက်နှာထား တည်တည်နဲ့ ပြောလွှတ်ရတယ်။
ဒီကြားထဲ ဘယ်သူ ဘယ်ဝါကတော့ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာကနေ သူတို့ အစည်းအရုံးကောင်းလို့ ဘယ်ဘာသာကို ပါသွားပြီဟေ့ ဆိုတဲ့ သတင်းကြားရင် "င့ါကလေးများ ဘာသာခြားသွားရင်" ဆိုတာမျိုး ပူမိပြန်တာပဲ...။
အဲဒီလို ပူပန်မိပြန်တော့ ငယ်ငယ်က ကျွန်တော်တို့ နေခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းတွေမှာ ကျွန်တော်တို့က ဘုရားရှိခိုးနေကြချိန် မျက်လုံးလေး ပေကလပ်ပေကလပ်နဲ့ လက်ကလေး ပိုက်ပြီး အဝေးကို ငေးနေကြရှာတဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက အတန်းဖော်တွေကို မျက်စိထဲ ပြေးမြင်မိတယ်။
သူတို့ရော ဘယ်လို ခံစားနေကြရှာခဲ့မလဲ။
လူနည်းစု ခံစားချက်ကို ဦးစားပေးတဲ့ အနေနဲ့ စာသင်ကျောင်းတွေမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ အတိုင်း ဘုရားရှိခိုးစေတာ ရပ်ပေးရမလားလို့ မေးရင် ကျွန်တော် မဖြေနိုင်ပါဘူး။ ရပ်ပေးပါလို့ ပြောဖို့လဲ လုံးဝ မ၀ံ့တာ အမှန်ပါပဲ။ ဗုဒ္ဓဘာသာ မိဘ တယောက်အနေနဲ့ဆို ကိုယ့်ကလေးက ကျောင်းသွားတာ စာလဲတတ်၊ ဘာသာရေးလဲ ကိုင်းရှိုင်းဆိုတာမျိုးကို သိပ်လိုချင်တာပေါ့။
ဒါဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် ကလေးတွေက သြကာသ ဆိုနေကြချိန်မှာ လူနည်းစု ကလေးတွေအတွက်ရော သူတို့ ဘာသာအလိုက် သီးခြား အခန်းတခုခုမှာ ဖြစ်ဖြစ် ၀တ်ပြု ဆုတောင်းစေတဲ့ အစီအစဉ်လေး လုပ်ပေးရင်ရော ကောင်းမလား။ ခပ်တိမ်တိမ်ဉာဏ်နဲ့ မီသလောက် တွေးမိတယ်။
တချို့ကျောင်းတွေမှာ အဲဒီလို အစီအစဉ်လေးတွေ ရှိနေနှင့်ပြီးသားဆို အကောင်းဆုံး ဖြစ်မှာပဲ၊ မရှိသေးရင်လဲ ရှိနေရင် ကောင်းမှာပဲလို့ လူနည်းစု ခံစားချက်နဲ့ အတွေးကျောက ရှည်မိပြန်ရော...။
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံတော် သီချင်း အစကိုက "တရားမျှတ လွတ်လပ်ခြင်းနဲ့ မသွေ ~~" လို့ အစချီထားတာ မဟုတ်လား။ တရားမျှတရမယ်၊ လွတ်လပ်ခြင်း ဆိုတဲ့ သူတပါးကို မထိပါးသည့် လွတ်လပ်စွာ ယုံကြည်ကိုးကွယ်ခွင့် ကို မျှမျှတတ ရှိခြင်းကနေ မသွေဖယ်ရဘူးလို့ ဆိုလိုတာ မဟုတ်လား...။
စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ မေးခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့် မေးခွန်းကို သူတို့ ကျောင်းရဲ့ တာဝန်ခံက ခပ်ပြုံးပြုံးပဲ ဖြေခဲ့တယ်။
"အခု ခင်ဗျားသမီးကို ထားမယ့် ကျောင်းမှာ အဲဒီလို ဘာသာရေးတွေနဲ့ ဆိုင်တာ လုံးဝ မသင်ပါဘူး ခင်ဗျာ။ ဘာသာရေးကျောင်း တချို့က သီးသန့်ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားတို့လို လူနည်းစုတွေကိုပါ ထည့်သွင်းစဉ်းစားတဲ့ အတွက် အခု ခင်ဗျားသမီးရဲ့ ကျောင်းမှာ ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တာ လုံးဝ မသင်ပါဘူး၊ စိတ်မပူပါနဲ့"
ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံက ကျောင်းတခုခုမှာ...။
ကျောင်းလာအပ်တဲ့ မိဘတယောက်ယောက်က ကျွန်တော် မေးတဲ့ မေးခွန်းလိုမျိုး ဗုဒ္ဓဘာသာ ဆိုတဲ့ နေရာမှာ တခြား ဘာသာ တခုခု အမည်နဲ့ ကျောင်းကို မေးခဲ့ရင်...။
ပြန်ဖြေဖို့ အဆင်သင့် ဖြစ်ပြီလား။
Posted by ကလိုစေးထူး at 10:42 AM3comments
နေနည်း တူမတူ ...
စာဖတ်နည်း သုံးနည်းထဲက တနည်းဖြစ်တဲ့ စာပေဟောပြောပွဲ နားထောင်ခြင်းကို လုပ်ဖြစ်တယ်။ ဆရာ ဦးဘုန်း (ဓာတု)၊ ဆရာ ညီမင်းညိုနဲ့ ဆရာ ဦးကိုနီတို့ မလေးရှားမှာ ဒီနှစ် နှစ်ဦးပိုင်းတုန်းက ဟောပြောခဲ့ကြတာတွေကို နားထောင်ဖြစ်ပါတယ်။ တယောက်ကို တနာရီခွဲလောက် ပြောကြတာ ဆိုတော့ သုံးယောက်စာ နားထောင်ပစ်လိုက်တာ အားပါးတရပဲပေါ့။
အဲဒီဆရာတွေ ဟောပြောနေသမျှ၊ ဟောပြောခဲ့သမျှတွေကို နားထောင်လိုက်ရင် စာပေရေးရာ မှတ်သားစရာများအပြင် အထင်အရှား ကြားနိုင်၊ မြင်နိုင်တာကတော့ လက်ရှိ မြန်မာ့ နိုင်ငံရေး အနေအထားပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်လောက်က ဟောပြောချက်ကို နားထောင်မိရင် အဲဒီတုန်းက အခြေအနေပေါ့။ အခုခေတ်ကာလ ဆိုရင်လဲ အခုခေတ်ကာလ အခြေအနေတွေကို သူတို့ ဟောပြောချက်တွေထဲမှာ နားထောင်နိုင်လိမ့်မယ်။
ဦးဘုန်းရဲ့ ပြောစကား တခုကို နားထောင်မိတဲ့အခိုက်မှာ ခဏရပ်ပြီး စဉ်းစားကြည့်မိတယ်။ သူပြောတာက ဘာလဲ ဆိုတော့...
"ကြုံကြိုက်လို့ ပြောပါရစေ၊ ကျွန်တော်ဟာ စာရေးဆရာ တယောက်ပါ။ နိုင်ငံရေးသမား မဟုတ်ပါဘူး။ ညီမင်းညိုဟာ နိုင်ငံရေးသမား လုံးဝ မဟုတ်ပါဘူး။ စာရေးဆရာဟာ ကိုယ်ဖြတ်သန်းတဲ့ ခေတ်ကို မှတ်တမ်း တင်ခြင်းပါပဲ"
စာရေးဆရာ ရင့်မ သူတို့က စာရေးခြင်းကို အဲဒီလို ခံယူတယ်။ ကျွန်တော်လို ဟိုရေးဒီခြစ်သမားကလဲ စာရေးခြင်း ဆိုတာကို အဲဒီအတိုင်းပဲ ယုံကြည် လက်ခံထားပါတယ်။
လေပြည်ညှင်းလေးတွေ တိုက်ခတ်လို့ သာသာယာယာ ရှိလှတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင် တခွင်ကို စာဖွဲ့သီကျူးချင်တာပေါ့။
ချစ်ခြင်း မေတ္တာတွေရဲ့ အတိမ်အနက်ကိုလဲ ဖော်ကျူးကြည့်ချင်ပြန်တာပဲ။
လွမ်းဆွေးခြင်းဟာ ရသ တပုဒ်လဲ ဖြစ်သွားနိုင်တာပဲ မဟုတ်လား။
ကိုယ့်နိုင်ငံ ကိုယ့်တိုင်းပြည် ရွှေပြည်ကြီးက တော်တည့်ခြင်း၊ မတော်မနန်း ဖြစ်ခြင်းတွေအပေါ် ကိုယ့်အမြင်ကို ချခင်းပြရတာလဲ စာရေးသူ တယောက်ရဲ့ အလုပ်ပဲ။
စာရေးသူ တယောက်ယောက်ရဲ့ စာတွေဟာ သူ ဖြတ်သန်းနေတဲ့ ခေတ်ကို ဖော်ပြနေရမယ် ဆိုတာက စာဖတ်သူ ကျွန်တော်ရဲ့ ကိုယ့်ဘာသာ ခံယူထားတဲ့ နားလည်မှုပါပဲ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်တုန်းက အချစ်ရေ၊ မောင်ရေ ရေးပြီး နောက် အနှစ်နှစ်ဆယ်လဲ မောင်ရေ၊ အချစ်ရေပဲ ရေးနေမြဲ စာရေးသူတွေလဲ ရှိနိုင်တယ်။ သူ့လိုင်းနဲ့သူမို့ ထူးပြီး မှတ်ချက် မပေးလိုပေမယ့် ခေတ်ရဲ့ ပုံရိပ် ပိုမိုထင်ဟပ်စေတဲ့ စာရေးဆရာများဟာ ကျွန်တော့်ကို ပိုပြီး ဆွဲဆောင်နိုင်သလို ကျွန်တော်ကလဲ သူတို့ကို အတုယူပါတယ်။
"လူတွေ ဘာနဲ့ နေကြသလဲ"
ရုရှ စာရေးဆရာ လီယိုတော်စတွိုင်းက ၁၈၈၁ ခုနှစ်မှာ ရေးခဲ့တဲ့ အဲဒီ စာအုပ်ကို မောင်ထင်က ဘာသာပြန်ပါတယ်။ အဲဒီ စာအုပ်ပါ အချက်အလက်တွေကို အခြေခံပြီး ဦးဘုန်းက ဟောပြောတယ်။
အဖေအမေနဲ့ အတူနေတဲ့လူရှိမယ်။ ချစ်သူနဲ့ အတူနေသူရှိမယ်။ အိမ်နဲ့ နေမယ်။ ငွေနဲ့နေမယ်။ အဖိုးတန် ကားကြီးတွေနဲ့ နေမယ်။ မိသားစုနဲ့ နေမယ်။ အာဏာနဲ့ နေမယ်။ မာန်မာနနဲ့ နေမယ်။ အဆောင်အယောင်တွေနဲ့ နေမယ်။ မနာလိုခြင်းတွေနဲ့ နေမယ်။ လေ့လာ ဆည်းပူးခြင်းနဲ့ နေမယ်။ ပျင်းရိခြင်းနဲ့ နေမယ်။ မေတ္တာတရားနဲ့ နေမယ်။ ကိုယ်ချင်းစာတရားနဲ့ နေမယ်။
စာလာဖတ်သူကလဲ ဒီစာကို ရေးထားတဲ့ ကျွန်တော်နဲ့ မတူတဲ့ နေနည်း ရှိသလို တူတာတွေလဲ ရှိကြမှာပါပဲပေါ့။
ဒီအကောင်တော့ ဒါတွေ ရေးနေပြန်ပြီ၊ ဟိုကိစ္စတော့ ရေးပြန်ပဟ ဆိုပြီး စိတ်ထဲ မတွေ့ ဖြစ်နေရင်တော့ ရိုးရိုးပဲ ပြန်ပြောစရာ ရှိတယ်။ ဒါက ကျွန်တော့် နေနည်းပါပဲ။ ကျွန်တော့် နေနည်းကိုက ပုံကျ ဟုတ်လှချည့်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မပြောခဲ့ဖူးသလို ခင်ဗျားနေနည်း အတိုင်း ကျွန်တော်က ပုံစံတူ လိုက်နေဖြစ်ချင်မှ နေဖြစ်မှာကိုတော့ နားလည်စေချင်တယ်။
စာတွေ ရေးပါဦးမယ်။ ဘယ်အချိန်ထိလဲ ဆိုတော့ ရေးချင်စိတ်တွေ မကုန်မခန်းသွားသရွေ့ပေါ့။ ဖတ်မှတ်၊ ရေးသား ရတာကိုက ကျွန်တော့် နေနည်း တမျိုးကိုး။
Posted by ကလိုစေးထူး at 9:45 AM 1 comments
ဒီမနက်မှာ တခု တွေးမိတယ်။
ကျွန်တော့်မှာ မျက်နှာ ဘယ်နှစ်ခု ရှိပါလိမ့်။ ဒီကိစ္စကို တွေးမိလိုက်တော့ ရယ်စရာလဲ ကောင်းသလို တရားကျချင်ချင် ဖြစ်စရာလဲ ကောင်းတယ်။
ခင်ဗျားကတော့ မျက်စိလည်သွားမလား မပြောတတ်ဘူး။ မလည်နဲ့ဗျ၊ ဟုတ်တယ်၊ အဲဒါ တကယ်။ လူတိုင်း ကိုယ်စီမှာ မျက်နှာတွေ အများကြီး ရှိတယ်။
ပြောပြမယ်။ ကျွန်တော် ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ကျွန်တော့် မျက်နှာတွေ အကြောင်း...။
အိမ်ထဲမှာ ကျွန်တော်က ကိစ္စတခုကြောင့် ဒေါသတွေ ထွက်နေတယ်။ မှန်ရှေ့ကနေ အမှတ်မထင် ဖြတ်သွားမိလို့ မြင်လိုက်ရတဲ့ ကျွန်တော့်မျက်နှာဟာ တော်တော့ကို ခက်ထန်တာ ကိုယ့်ဘာသာတောင် လန့်တယ်။
အဲဒီ အချိန်မှာ တံခါးခေါက်သံ တခု ကြားတယ်။ ဖွင့်ပေးလိုက်တော့ ကျွန်တော်နဲ့ အင်မတန် ရင်းနှီးတဲ့ မိတ်ဆွေ တယောက်က ကိစ္စတခုနဲ့ ကျွန်တော့်ဆီ လာတာ...။ ဒီတော့ စောစောက ခက်ထန်နေတဲ့ မျက်နှာကို အမြန်လွှင့်ပစ်ရတယ်။ နောက်ထပ် မျက်နှာတခုကို ခပ်မြန်မြန်ပဲ ပိုင်ဆိုင် ပစ်လိုက်ရတယ်။
အလုပ်ထဲ ရောက်ပြန်တော့လဲ လူတွေ တယောက်ချင်းစီနဲ့ ဆက်ဆံ စကားပြောဖို့ အတွက် ကျွန်တော့်မှာ မျက်နှာပေါင်း များစွာ ဆောင်ထားရတယ်။ လိုအပ်ချက်နဲ့ အညီ ပြုံးဖို့၊ ရယ်ဖို့၊ တည်ဖို့ ... ... ...။
ဘယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပဲ သွားသွား လိုသလို လဲလှယ်ပစ်လိုက်ရတဲ့ မျက်နှာတွေ ဆိုတာ...။ တခါတလေကျတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ မူရင်းမျက်နှာ အစစ်က ဘယ်ဟာမှန်းတောင် မသိဘူး။
အမြဲပြုံးနေတဲ့ မျက်နှာလား။ သိပ်ပိုင်ချင်တာပေါ့ဗျာ။ လူမြင်ကောင်းတယ်လေဗျာ။ အပြုံးလောက် နှစ်လိုဖွယ်ရာ ကောင်းတဲ့ မျက်နှာ ဘယ်မှာ ရှိနိုင်သေးလို့လဲဗျ။ ဒါပေမယ့် တခါတလေကျရင်တော့ ကိုယ်မပိုင်ဆိုင်ချင်ပေမယ့်လဲ ကိုယ့်ဘာသာ တပ်ဆင်မိလျက်သား ဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာတွေက ရှိသေးတယ် မဟုတ်လား။
စိတ်ရှည်တတ်တဲ့ လူတယောက်ရဲ့ မျက်နှာကို ကျွန်တော်ပိုင်တယ်။
ခံပြင်း ဒေါသထွက်နေတဲ့ လူတယောက်ရဲ့ မျက်နှာကို ကျွန်တော်ပိုင်တယ်။
၀မ်းနည်းနာကျင်တဲ့ မျက်နှာကိုလဲ ကျွန်တော်ပိုင်တယ်။
တက်ကြွ လန်းဆန်းနေတဲ့ မျက်နှာ..
အလောတကြီး ဆန်လွန်းတဲ့ မျက်နှာ...၊ အဲဒါတွေကိုလဲ ကျွန်တော် ပိုင်တာပဲ။
အပြစ်ကင်းတဲ့ မျက်နှာ...၊ အင်း ဒီမျက်နှာ ကျွန်တော့်မှာ ရှိသေးလား မရှိတော့ဘူးလား ဆိုတာ တကယ် မသဲကွဲဘူး။
ကောက်ကျစ်တဲ့ မျက်နှာ..၊ မရှိဘူးလို့ ကိုယ့်ဘက်ကိုယ့်ယက် တွေးမိရင်း ဘယ်တော့မှ မရှိမိအောင်လဲ ကြိုးစားနေရမှာ။
ခင်များမှာရော မျက်နှာတွေ ဘယ်နှစ်ခုလောက် ရှိလဲဗျ။
Posted by ကလိုစေးထူး at 12:53 PM3comments
Posted by ကလိုစေးထူး at 6:01 AM 1 comments
ရန်ကုန်တိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းရဲ့ စကားလေး တခွန်းကို အင်မတန် သဘောကျမိတယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင် ကူးပြောင်းရေးဟာ အသိတရားနဲ့ အုပ်ချုပ်တဲ့ စနစ်တခုကို ထူထောင်ဖို့ ကျွန်တော်တို့ ကြိုးပမ်းနေတာ ဖြစ်ပါတယ်"
အရပ်သား အစိုးရ စစ်စစ်က အုပ်ချုပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံအဖြစ် ကူးပြောင်းကြပြီဟေ့ ဆိုတာနဲ့ ကျွန်တော်တို့က ဘာဖြစ်လဲ ဆိုတော့ အဲဒီ စနစ်နဲ့ အောင်မြင်နေတဲ့ နိုင်ငံကြီးတွေဆီ လှမ်းမျှော် ငေးမိတတ်ကြတယ်။ သူတို့ကျ ဘယ်လို စီမံတယ်ပေါ့...၊ ဘယ်လို အောင်မြင်တယ်ပေါ့။
ဒါပေမယ့် ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံကြီးတွေ ဖြစ်လင့်ကစား သူတို့ဆီကနေ ကျွန်တော်တို့က အတုယူစရာ ရှိနေသလို အတု မယူသင့်တာတွေလဲ ရှိတာပေါ့..။
သူတို့ နိုင်ငံတွေဆီမှာ လွတ်လပ်စွာ ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခွင့်၊ ပြောဆို ရေးသားခွင့်တွေ ရှိတယ်။ ဒါ..၊ လူတိုင်း သိနေတာပဲ။ ဆန္ဒပြပွဲ တခုခု ဖြစ်နေရင် ရဲက (လိုအပ်ရင်) အဲဒီနေရာကို လာမယ်။ အများပြည်သူ သွားလာနေတာ၊ အပန်းဖြေနေတာ မထိခိုက်စေရမယ့် နေရာလေး သတ်မှတ်ပေးမယ်။ ပြီးရင် ပြစမ်း၊ ဆန္ဒ။ အော်စမ်း တို့အရေး...။
အိုဘားမားကို ကန့်ကွက်ရုံမကလို့ ကလော်ပဲ တုတ်တုတ်၊ ပြဿနာ မရှိ။ ဒါပေမယ့် ညအချိန်မတော် မူးမူးနဲ့ ဘေးအိမ် အိပ်မရအောင် အော်ဟစ် ဆူညံနေဖို့တော့ မစဉ်းစားနဲ့။ ဘေးအိမ်က တိုင်ရင် ရဲ ရောက်လာလိမ့်မယ်။ အသံတွေ တိတ်ရင်တိတ်၊ မတိတ်ရင် သွား..၊ အချုပ်ခန်းထဲ။
ငါ့မိန်းမ ငါရိုက်တယ်ကွာ၊ ဘာဖြစ်လဲ လာမလုပ်နဲ့။ သွား...၊ အချုပ်ထဲ။ အချုပ်က လွတ်လာရင်လဲ လာပါလိမ့်မယ်၊ အမျိုးသမီး စောင့်ရှောက်ရေး အသင်းလိုဟာမျိုးက နှစ်ပတ်တခါလောက် အိမ်ကို လာလာပြီး ဇနီးသည်ကို မေးမယ်။ ကျွန်မယောက်ျား ကျွန်မကို ဆော်ပလော်တီးနေတုန်းပါပဲရှင့် ဆိုလို့ကတော့ သွားပေဦး၊ နောက်တခါ အချုပ်ထဲ...။
အရက်ကလေး ထွေထွေနဲ့ ကားများ မမောင်းလိုက်လေနဲ့။ ငါ ဘယ်သူ့ကိုမှမှ မတိုက်သေးဘူးလေကွာ လို့လဲ လာမပြောနဲ့...။ မူးပြီးမောင်းသလား။ လိုက်ခဲ့ အချုပ်ထဲ။ ကားမောင်းတဲ့ ပြစ်ဒဏ် မှတ်တမ်းမှာ တခြား အပြစ်တွေသာ အချိန်ကာလ တခုကို လွန်ရင် မှတ်တမ်း ပျောက်ပျက်မယ်။
မူးပြီး မောင်းထားတဲ့ ပြစ်ဒဏ်သည် ဘယ်တော့မှ မပျောက်။ ပထမတကြိမ် တော်ရုံမူးရင် ပညာပေးမယ်။ ဒဏ်ငွေလောက်နဲ့ ပြီးချင်ပြီးမယ်။ နောက်ထပ် ထပ်မိရင် သွား...၊ ထောင်ထဲ။
ထောင်က လွတ်လာလို့ ငါတော့ လွတ်ပဟ ဆိုပြီး အရင်လို သောင်းကျန်းမယ် မကြံနဲ့ဦး။ မူးပြီး ကားမောင်းလို့ ထောင်၊အချုပ်ကျပြီး လွတ်လာတဲ့လူမျိုးကို ရိုးရိုး မလွှတ်ဘူး။ ကာလ ဘယ်လောက်အထိ၊ အရက်ဆိုင်၊ ဘား၊ ကလပ် မသွားရဆိုပြီး ခြေချုပ်နဲ့ လွှတ်ပေးလိုက်တာမျိုး။ အဲဒီလို ကန့်သတ်တဲ့ ကြားထဲက ခိုးသွားရင် သိနိုင်အောင် သူ့ခြေကျင်းဝတ်မှာ သူ ဘယ်ရောက်နေတယ် ဆိုတာ သိနိုင်တဲ့ GPS စနစ် တပ်ထားတဲ့ ကိရိယာလေးကို တပ်ပြီးမှ လွှတ်ပေးလိုက်တာ။ ဘား၊ အရက်ဆိုင် ရောက်ပြီ ဆိုတာနဲ့ အဲဒါလေးက ရဲကို လှမ်းအချက်ပြလိမ့်မယ်။ ဒါဆိုရင် သွားပေဦး၊ ထောင်ထဲ။
ရာဇ၀တ်ပြစ်မှုတွေနဲ့ လွတ်လာတဲ့ လူတွေကို ခြေချုပ်ပေးရင်လဲ ဒီအတိုင်းပဲ။ ဒီပြည်နယ်ကနေ ဘယ်ကိုမှ မထွက်နဲ့ဆို မထွက်နဲ့ပဲ။ ထွက်လိုက်တာနဲ့ အဲဒီ ခြေကျင်းဝတ်က ဟာလေးက ရဲကို အကြောင်းကြားမယ်။
ဆိုတော့...၊ အဲဒါတွေသည် အတုယူသင့်တဲ့ ကိစ္စတွေ။ တချို့အရာတွေကိုက နည်းပညာ လိုက်မမီနိုင်သေးတာသည် ထားတော့၊ နည်းနာတွေကတော့ အတုယူကို ယူရမယ့် ကိစ္စမျိုးတွေ။
အတု မယူသင့်တာ ဘာတွေလဲ...။
အမေရိကားက ပြည်နယ်တိုင်းမှာ အဖော်အချွတ် ကလပ်တွေရှိတယ်။ ကာစီနို လောင်းကစားရုံတွေ တရားဝင် ရှိတယ်။ Adult stores တွေ ရှိတယ်။
ဒါတွေကို သွားအတုယူလို့ မရဘူး။ သူတို့ကတော့ သူတို့ အသိတရားနဲ့ သူတို့ ဥပဒေ ဟန်ချက်ညီ ထိန်းနိုင်သယောင် ရှိတယ် ဆိုသည့်တိုင် အဲဒီ အရာတွေကနေ ထွက်လာတဲ့ ဆိုးကျိုးတွေကို သူတို့လဲ ခံရတာပဲ။
ကျွန်တော်တို့လို နိုင်ငံတွေက ဒီအချိန်မှာ လိုက်လုပ်ရင် ဘယ်မှာ လာကောင်းနိုင်မလဲ။
ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံအဖြစ် အသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာ အသိတရားသည် အရင် အဓိက အကျဆုံးပဲ။ ဖမ်းတာဆီးတာတွေ မလိုအပ်ဘဲနဲ့ ကောင်းတဲ့ ကိစ္စတွေ အကောင်အထည် ပေါ်သွားဖို့က အသိတရားဟာ အဓိက ပိုကျမှာပေါ့။
အသိတရားနဲ့ အကောင်အထည်ဖော်ရုံလောက်နဲ့ မလုံလောက်တော့ရင်တော့ တားမြစ်ချက်တွေ၊ ဥပဒေတွေက မရှိမဖြစ်လိုအပ်တာပဲ။ အဲဒီလို အချိန်ကျမှာ နိုင်ငံတကာမှာကတော့ ဘယ်လိုကွ ဘယ်ဝါကွလို့ လိုရာဆွဲ ပြောလို့မရဘူး။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ စည်းကမ်းသည် သူ့တန်ဘိုးနဲ့သူပဲ။
ကောင်းတာကို အတုယူမယ်။ မကောင်းတာဆို ယောင်လို့တောင် သွားမတုတာ ပိုအဆင်ပြေလိမ့်မယ်။
Posted by ကလိုစေးထူး at 5:24 PM0comments
အဲဒီနေ့က မိုးရွာတယ်။ ရွာတာမှ ညဦးပိုင်း ကတည်းကနေ နောက်တနေ့ ညနေစောင်း အထိ စိမ့်တလှည့် သဲတလှည့်နဲ့ ရွာတာ ...။
မနက် မိုးလင်းတော့ ကျောင်းသွားရမယ့် ကလေး တယောက်က "ဟေးး မိုးတွေ ရွာတယ်ဟေ့" ဆိုပြီး မြူးထူးနေတယ်။ ကျောင်းမသွား ရတဲ့ ကလေးတချို့ ကလဲ ဟိုး ခပ်လှမ်းလှမ်းက မိုးရေထဲမှာ
ရွာနိုင်လွန်းတဲ့ မိုးကို ကဗျာဆရာ တယောက်က မိုးဘွဲ့ ကဗျာတပုဒ် ရေးလိုက်တယ်။
လမ်းပြင် အလုပ်သမား တယောက်က မိုးကြောင့် အလုပ်ပျက်ပြီး မရတော့မယ့် နေ့တွက်ခ အတွက် ညည်းညူတယ်။
သောက်သုံးရေ အတွက် ခန်းနေတဲ့ ရေတွင်းတွေ ရေပြန်ပြည့်လာတော့မှာကို တွေးပျော်သူက ပျော်တယ်။
မိုးရေကြောင့် စိုအိအိ ဖြစ်နေတဲ့ တမျှော်တခေါ် လယ်ကွင်းကို ဦးကြီးတယောက်က သူ့လယ်တဲ အထဲကနေ ထိုင်ငေးနေတယ်။
စာရေးဆရာမ တယောက်ကတော့ မိုးရွာတဲ့ မနက်ခင်း တခုကို ဇာတ်အိမ်တည်ပြီး လုံးချင်း ဝတ္ထု တပုဒ်ကို သဲကြီးမဲကြီး ရေးနေတယ်။
မီဒီယာသမား တယောက်ကတော့ မိုးရေ တင်လို့ ရေဝပ်နေတဲ့ လမ်းကို ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ပြီး သတင်း တပုဒ်ကို ခပ်သွက်သွက် ရေးတယ်။
နိုင်ငံရေးသမား တယောက်ကတော့ မိုးရွာလို့ ရေကြီးတာက အစိုးရက ရေစီးရေလာ စနစ်ကို စီစဉ်မှု ညံ့ဖျင်းတာက အစ၊ သစ်တောတွေ စည်းမရှိကမ်းမရှိနဲ့ခုတ်ခွင့်ပေးတာ အလယ်၊ အမှိုက်တွေ စည်းကမ်းမဲ့ ပစ်တာ အဆုံး စီကာပတ်ကုံးနဲ့ နိုင်ငံရေး သုံးသပ်ချက်တွေ ပြုစုတယ်။
စာသင်ကျောင်း က ကျောင်းဆရာမက မိုးဥတု အကြောင်းကို အပြင်ကရွာနေတဲ့ မိုးဆီ စာသင်ခန်း ထဲကနေ လက်ညိုးကလေး တညွန်ညွှန်နဲ့ ကျောင်းသားတွေကို စာသင်နေတယ်။
ဒီညမှာ တကိုယ်တော် စင်တင်ဖျော်ဖြေပွဲ ရှိတဲ့ အဆိုတော် တယောက်ကတော့ သူ့ပွဲပျက်မှာ စိုးရိမ်စိတ် နဲ့ ရွာနိုင်လွန်းတဲ့ မိုးကို ကျိန်ဆဲတယ်။
အဘိုးနဲ့ အဘွားက သူတို့ ငယ်စဉ်က မိုးရေထဲက အချစ် ဇာတ်လမ်းလေးကို အတူတူ သတိရနေကြတယ်။
စစ်ပြန်တယောက်ကတော့ မိုးရေထဲမှာပဲ ချိုင်းထောက် တလက်ကို အားပြု လျှောက်ပြီး ဝမ်းစာ ရှာနေတယ်။ သူရောင်းနေတဲ့ စံပယ်ပန်းကုံးတွေ ကလဲ ရွှဲရွှဲစို လို့ ...။
မိုးသည်းသည်း အောက်မှာပဲ လူနှစ်ယောက် လမ်းခွဲမှု ကို စတင်လိုက်ကြတယ်။
မိုးသည်းသည်း အောက်မှာပဲ တချို့လူတွေ ပေါင်းစည်း မိသွားကြတယ်။
Posted by ကလိုစေးထူး at 12:38 AM3comments